Labaatankii Maalmood ee lasoo Dhaafey oo Dalka South Africa lagu Diley 11 qof Soomaali ah.
Tirinta codadka doorashadii ka dhacdey dalka Uganda oo la sheegey in uu ku horeeyo m/weyne Musaveni.
Ciidamada Danab Ee Dowlada Federaalka Oo Deegaano Ka Qabsaday Al-Shabaab
SHirkii Madasha Qaran oo maalintii 3’aad soconaya iyo wararkii ugu danbeeyey.
Waxaa maalintii 3aad ka soconaya magaalada Muqdisho shirka madasha wadatashiga oo looga hadlayo qodobo xasaasi ah oo la xiriira arimaha doorashada, waxaana warar hor dhac ah oo soo baxaya sheegaya in ay jiraan qodobo leysku mari la’yahay. Shirka oo maalintii shalay warbixin ka dhageystay guddiga madaxabanaan ee xalinta khilaafaadka doorashada,...
Dhalinyarada oo Dawladda Dalka Kenya ka Wacyi Gelineyso Ku Biiritaanka Al-shabaab.
Saraakiisha Amaanka dalka Kenya ayaa sheegay in uu socdo qorsheo dhalinyarada xuduuda Kenya iyo Soomaaliya ku nool ay kaga wacyi gelinayaan ku biirida Ururka Al Shabaab. Gaar ahaan qorshan cusub ayaa beegsanaya dhalinyarada si ay uga dhaadhiciyaan sidii aysan ugu biiri laheyn Al Shabaab oo ay sheegeen inay dhibaatooyin badan...
Isbaheysiga Dawladaha Geeska Africa oo M/weyne Farmaajo Mar Kale Sharaxey Danta Ugu Jirta Soomaaliya.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale faah faahin dheeraad ah ka bixiyay danta Soomaaliya uga jirta isbaheysiga ka socda d Geeska Africa. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in muhiimada ugu weyn oo Soomaaliya isbaheysiga la leedahay tahay in leys tixgaliyo oo aan lagu xadgudbin sida uu hadalka u...
SHir ka dhan ah doorashada Donald Trump oo midawga Yurub yeelanayo.
Wasiiradda arrimaha dibedda Midowga Yurub oo kulan ku leh caasimadda Brussels, ayaga ka arrinsanaya saamaynta ay ku yeelan karto guusha uu doorashada Maraykanka ka gaaray Donald Trump. Qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiinta Yurub ayaa ka walaacsan hadaladii uu ololihiisa ka sheegay Mr Trump. Waxa ay si gaar ah uga...
Xiisad ka Taagan Degmada B/xaawo ee Gobolka Gedo oo laga Dalbadey Dawladda Soomaaliya in ay soo Fara geliso.
Maamulka Jubbaland ayaa ka hadlay xiisada ka taagan magaalada Beledxaawo ee gobolka Gedo, kadib markii darbiga Kenya ay ka dhiseyso xuduuda labada dal, ay gudaha u soo gelisay qaybo ka mid ah degmada. Arrintan, ayaa ka careysiisay bulshada ku dhaqan Degmada Baled Xaawo, waxayna maalmihii la soo dhaafay dhigeen Dibadbaxyo...
C/weli Cali Gaas oo Sheegey in Dagaalka Somaliland Soo Qaadey uu Argagixiso Gabaad u yahey.
Madaxweynaha maamulka Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay xiisada u dhaxeysa Maamulka Puntland iyo Somaliland, taasi oo dhawaan soo xoogeysatay, kaddib markii ciidamo ka kala tirsan labada maamul ay ku dagaalamaneen degaanka Tukaraq. Gaas ayaa sheegay 8-dii bishan ciidamo laga soo abaabulay sida uu hadalka u dhigay magaalada...
Wada Hadalo La Sheegay in ay U Furmayaan Dawlada Soomaaliya iyo Somaliland oo La Shaaciyey.
Ra'iisul wasaare kuxigeenka Soomaaliya, Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) wuxuu markii ugu horreeysay sheegay dowladda Federaalka inay qorsheysay kulan fool ka fool ah oo ay yeeshaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi. " Wada-hadalladii Soomaaliland iyo dowladda federaalka oo wajiyo badan yeeshan si fiican noogu qabsoomay, waxaa naga go'an haddii...
Dagaal sababey dhimasho iyo barakac baaxad leh oo dhex maerey ciidamo kawada tirsan dawladda federalka ah ee soomaaliya.
Ugu yaraan laba qof ayaa ku geeriyooday tiro intaa ka badanna way ku dhaawacmeen iska-horimaad maanta xaafadda Zone K ee degmada Hodan ku dhexmaray ciidammo ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Iska-horimaadkan oo socday muddo laba saacadood ah, kaasoo ka billowday dhul la isku-haysto oo ay ciidamada booliiska Somalia...
Degmada Wadajir ee G/banaadir oo lagu Toogtey Askeri ka tirsan Ciidamada Dawlada federalka Soomaaliya.a
Saraakiil ka tirsan maamulka degmada Wadajir ayaa warbaahinta u sheegay in rag hubeysan goor dhaw oo maanta ah ku toogteen degmada askari ka tirsanaa ciidamada asluubta dowladda federaalka Soomaaliya. Toogashada askariga waxaa geystay rag ku hubeysnaa bastoolad kuwaa oo goobta isaga cararay kaddib dilka askari ka tirsanaa ciidamada dowladda. Goob joogayaal...
Askar Itoobiyaan ah oo Laga Musaafiranayo Dalka Jabuuti Kuwaasoo Tiradooda Lagu Sheegay 16 askeri.
Dowladda Jabuuti ayaa dalkeeda ka musaafurineysa ilaa 16 Askari oo Itoobiyaan ah, kuwaa oo sida la sheegay gacan saar dhaw la leh Jabhada difaaca Tigray-ga. Sida ay sheegtay Warbaahinta gudaha Jabuuti 16 kan Askari oo ay ka mid yihiin Korneelo iyo Taliyayaal ayaa waxaa qabtay ciidanka ilaalada madaxtooyada kuwaa oo...